Faahfaahin ku saabsan wafdi ka socda Puntland oo gaaray gobolka Sanaag. | puntlandi.com
Faahfaahin ku saabsan wafdi ka socda Puntland oo gaaray gobolka Sanaag.
Weftigan oo hordhac u ah wufuud tiro badan oo kusoo waajahan guud ahaan gobolada Sanaag iyo Hayland ayaa waxaa hoggaaminayey Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland Sucaad Saalax Nuur.
Ujeedada safarka wafdigaan ayaa waxay ku saleysan tahay Kormeer shaqo oo ay ku mari doonaan dhammaan degmooyinka, tuulooyinka iyo degaanada goboladda Sanaag iyo Hayland ee dawladda Puntland iyo sidii looga hortegi lahaa farogalinta iyo xadgudubka maamulka Somaliland uu ku hayo goboladaasi.
Masuuliyiintu waxay sheegeen inay dowladda Puntland ka go’an tahay kana midaysan yihiin illaalinta amniga iyo xasiloonida gobolada Sanaag iyo Hayland, isla markaana ay maamulka Soomaaliland ka aqbalaynin inay khal-khal geliyaan nabadgelyada, xasiloonida iyo deganaanshaha dhammaan gobolada dawladda Puntland ee xuduudda la leh maamulkaasi Soomaaliland.